बी प्लसमा पास भएकी करिश्मा धेरै फोन आएर दिक्क! | Nepalisongskhabar.com
काठमाडौं । एसइई परीक्षा दिने निश्चित भएसँगै नेपाली अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले परीक्षामा कस्तो नतिजा ल्याउँछिन् भन्ने चासोको विषय थियो । बिहीबार त्यो चासो एसईईको परीक्षाफल सार्वजनिक भएसँगै सबैको जिज्ञासा मेटिएको छ ।
३ जीपीए ल्याएकी करिश्मा बी प्लस ग्रेडमा उत्तीर्ण भएकी छन् ।
अभिनेत्री मानन्धरले अध्ययन गरेको त्रिवेणी पब्लिक बोर्डिङ स्कुलको सेन्टर विजय स्मारक माविमा परेको थियो । काठमाडौंको डिल्ली बजारमा रहेको त्यस विद्यालयबाट उनले एसईई दिएकी हुन् ।
बिहीबार एसईईको परीक्षाफल सार्वजनिक हुँदा मानन्धरलाई मोबाइलमा घन्टी बजेर दिक्क बनायो । उनले बिहीबार दिउँसो समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘आज पहिलो पटक महसुस गरेँ घरीघरी फोन बज्दा के हुन्छ ।’
Published date : 2019-06-27
एउटा भिडियो शेयर गर्दै आलियाले मच्चाइन् तहल्का !
दुवाचौरमा भब्य ल्होछार सम्पन्न गायक एंव सङ्गितकार विशाल काल्तानले सबैलाइ नचाए ( फोटो फिचर सहित )
गायिका प्रविना आचार्यको आवाजमा ”राजा रानी ” भिडियो सहित